Saturday March 21, 2020 - 20:43:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Halaag daran ayaa ciidamada Melleteriga Maali kasoo gaaray weerar xoog kugal ah oo xoogag Jihaadiyiin Al Qaacidda ah ay ka fuliyeen saldhig melleteri oo dhaca waqooyiga wadankaasi.
Wararka ka imaanaya wadanka Maali ayaa sheegaya in ugu yaraan 30 askari ay dhinteen tobanaan kalane ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii xoogag taabacsan Jamaacada Ugargaaridda Islaamka iyo muslimiinta ay weerar ku qaadeen saldhig kuyaal duleedka magaalada Gaawah.
Afhayeenka uhadlay ciidanka Melleteriga xukuumadda dabadhilifka Maali ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadooda laga dilay 30 askari islamarkaana laga qabsaday saldhig meleteri oo kuyaal degmada Tarcent oo dhanka waqooyi uga beegan magaalada Gaawa.
War rasmi ah oo kasoo baxay Al Qaacidada galbeedka qaaradda Afrika ayay ku sheegatay mas'uuliyadda weerarkan, bayaan ay soo saartay mu'asasada Aszallaaqah ayaa lagu faah faahiyay weerarka ka dhacay saldhigga Tarcent.
Mujaahidiinta Jamaacada Ugargaaridda Islaamka iyo Muslimiinta ayaa bayaanka ku sheegay in weerarka ay ku dileen inkabadan 30 askari islamarkaarna ay ku qabsadeen 7 gaari gaari oo nuuca tiknikada ah iyo saanado melleteri.
Weerarkan wuxuu imaanayaa xilli Jihaadiyiinta Maali ay iclaamiyeen in ay diyaar u yihiin wadahadal ay lagalaan xukuumadda Maali balse waxay shardi ka dhigeen in marka hore ciidamada Faransiiska iyo kuwa Q.Midoobay wadanka laga saaro.